CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- PVC Quick Assembling Board Extrusion Line - CHINA JWELL Machinery Co., Ltd.
CHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- Tsipika mpanangona volo haingana an'ny PVC
Fotoana: 2018-04-18 Hits:
Ity extruder ity dia manana tombony amin'ny fanjifana angovo ambany, fahaizana avo lenta, fitrandrahana fitaovana maharitra ary androm-piainana maharitra.
2,vondrona fanaovana vaksiny
2.1 Miorina amin'ny sakany, ny famaritana ny latabatra fanitsiana dia: YF300, YF400, YF600 ..
2.2Ny latabatra fanitsiana dia afaka mihetsika ambony sy ambany, havanana sy havia miaraka amin'ny fanaraha-maso herinaratra. Ity fitaovana ity koa dia manana fitaovana fetra famerana toerana sy fitaovana bokotra vonjy taitra.
2.3Ny rafitra fanamafisam-peo sy fanamafisana ny rano dia ampahany manan-danja mba hahazoana antoka fa ny faritra tsotra sy malamalama ary mamirapiratra ary mampitombo ny fahaiza-manao.
3.1 Miorina amin'ny sakany, ny famaritana ny tarika hual-off dia: YF300, YF400, YF600 ..
3.2 Ny singa haul-off dia mifandray mivantana amin'ny motera ary manana fitaovana famerana fetra sy fitaovana bokotra vonjy taitra. Ny fehikibo na ny ambony na ny ambany dia fehezin'ny invertor matetika.
Ity fanapahana ity dia manana fahombiazana avo sy valin'ny fanapahana haingana. Ny faritra fanapahana ho an'ny vokatra dia madio sy milamina ary tsy mila fanodinana fanindroany.
5.1 Ity stacker ity dia mandeha ho azy ary miasa haingana, izay afaka mamonjy ny vidin'ny asa ihany koa.
6.1 PVC valin-drihana dia nesorina tao amin'ny substrate extruder PVC, ary avy eo dia ampiasao ny singa fametahana mba hahatonga ny sarimihetsika loko PVC indray mandeha mifono press. Ny fizotrany tsotsotra, apetaka amin'ny lakaoly milamina amin'ny tontolo iainana, tsy misy fofona, tsy misy poizina, tsy misy fandotoana.
6.2 Vokatry ny rindrina vita amin'ny PVC: 0.8-1 taonina / m3
6.3 PVC Integrated Wallboard tombony:
1) Porofon-drano sy hamandoana. Vahaolana ifotony io olana io fa ny vokatra vita amin'ny hazo dia mety ho lo sy hanitatra ary hihasimba aorian'ny fitrohana ny hamandoana ary azo ampiasaina amin'ny tontolo iray izay tsy azo ampiharina ny vokatra hazo nentim-paharazana.
2) Fisorohana ny bibikely sy ny ana-nofo, manala amin'ny fomba mahomby ny fanorisorenana ataon'ny bibikely ary manalava ny androm-piainany.
3) Miloko sy misy amin'ny loko maro. Tsy hoe manana firafitra hazo voajanahary sy volon-kazo ihany, fa azo amboarina ihany koa mifanaraka amin'ny lokony tiany.
4) Ny takelaka haingon-trano PVC dia maivana amin'ny lanjany, hafanana, hafanana, hafanana, porofon-afo, mahazaka asidra, ary mahazaka harafesina.
5) Milamina, diélectrique, mateza, anti-antitra, mora lasina sy mifamatotra.
6) Hery matanjaka sy fiatraikany amin'ny fihenjanana, fanitarana avo lenta amin'ny fiatoana.
7) malama ny lokony, mamirapiratra ny lokony, haingon-trano be ary manana fampiharana haingo isan-karazany.
8) Ny fizotran'ny fananganana dia tsotra sy mora apetraka. Ny fitaovana dia mampiasa rijan-kevitra ara-tontolo iainana izay tsy misy subst manimba
HIVERINACHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara- PVC Three Layers Co-extruder Line
NEXTCHINAPLAS2018 Fitaovana tena tsara - Plastika Geogrid Extrusion